गुगलमा ‘फटाहा’ सर्च गर्दा किन आउँछ प्रधानमन्त्री देउवाको नाम ? – Dailny NpNews
प्रकाशित मिति: आइतबार, साउन ०३, २०७८ समय: १७:१०:३२
देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई दिन पश्चातबाटै गुगलमा ‘फटाहा इन नेपाल’ अथवा ‘फटाहा अफ नेपाल’ भनेर सर्च गर्दा उनको नाम र फोटो देखाउन थालेको हो । यसको कारण के हो त ? के गुगलमा देखिएको यस्तो घटना यो नै पहिलो घटना हो ?पक्कै पनि होइन । किन भने यसअघि पनि गुगल एल्गोरिदमको त्रुटीको कारण यस्ता थप्रै घटना भएका छन् । सन् २०१८ मा ‘इडिएट’ भनेर गुगलमा सर्च गर्दा अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम्पको तस्वीर देखाउने गरेको थियो ।